AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ NKE AKỤKỌ
1843: Joseph Smith kwupụtara mkpughe ya banyere alụmdi na nwunye ọtụtụ.
1862: Ndị omeiwu US tinyere iwu Morrill Anti-Bigamy.
1882: Ndị nnọchi anya US nyere iwu Edmunds Anti-Polygamy Act.
1886: John Taylor natara mkpughe banyere ịga n'ihu ịlụ di na nwunye.
1887: US Congress wepụrụ Iwu Edmunds-Tucker.
1890 (October 6): Wilfred Woodruff kwupụtara ọkwa nke machibidoro ịlụ di na nwunye.
1904-1907: A nụrụ ikpe na US Senate na oche nke Reed Smoot dị ka Senator si Utah.
1904 (Eprel 6): Joseph F. Smith nyere Iwu nke abụọ nke na-eyi egwu ịchụpụ ndị otu LDS ndị lụrụ di na nwunye.
1910: Chọọchị LDS malitere amụma nke ịchụpụ mmadụ maka di na nwunye ọhụrụ.
1929-1933: Lorin C. Woolley mepụtara "Kansụl Ndị Enyi."
1935 (Septemba 18): Lorin C. Woolley nwụrụ, Joseph Leslie Broadbent ghọrọ onye isi nke Council Council.
1935: Broadbent nwụrụ, John Y. Barlow ghọrọ onye isi nke Council Council.
1935: Ndị omebe iwu Utah buliri mpụ nke ibikọ iwu na-akwadoghị site na iwu ọjọọ na mpụ.
1941: John Y. Barlow họpụtara Leroy S. Johnson na Marion Hammon na Kansụl Ọkwa Nchụ aja.
1941: Alma “Dayer” LeBaron guzobere Colonia LeBaron na Mexico, dịka ebe mgbaba maka ndị chọrọ ịlụ di na nwunye
1942: E guzobere Atụmatụ Mgbalị Atụmatụ nke United.
1944 (March 7-8): A na-eduzi mbuso agha nke otu nwanyị.
1949: Joseph Musser nwere ọrịa strok wee kpọọ dọkịta ya, bụ Rulon C. Allred, ka ọ bụrụ okenye nke abụọ ya.
1952: Councillọ Nzukọ Ọchịchị ahụ kewara abụọ: FLDS (Leroy S. Johnson) na Apostolic United Brethren (Rulon Allred).
1953 (July 26): A wakporo mwakpo ahụ na obodo polygamist na Short Creek.
1951-1952: Site na ọnwụ Joseph Musser, Rulon Allred ghọrọ onye isi nke Council Council.
1960: Rulon Allred zụtara 640 acres na Pinesdale, Montana dị ka ogige ndị polygamist.
1977: Onye gburu nwanyị nke Ervil LeBaron gburu Rulon; Owen Allred buru onye isi.
2005: Owen Allred nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri itoolu na otu, mgbe ọ họpụtara Lamoine Jensen ka ọ bụrụ onye nọchiri ya.
2015: Lamoine nwụrụ site na ọrịa cancer nke eriri nke mere ka nkewa buru ibu na otu, ụfọdụ na-eso Lyn Thompson na ndị ọzọ na-eso Morris na Marvin Jessop.
Okposụkedi ediwak mbon Mormon ẹyomde ndibiak idem site na omume ahụ, otu nwanyị mbụ bilitere na ọnọdụ Mormon na 1831 mgbe Joseph Smith Jr., [Image na nri] guzobere Chọọchị Mormons, nke a makwaara dịka Chọọchị nke Jisọs Kraịst nke Ndị Nsọ Ikpeazụ, kwuru na ya nwere mkpughe na ọ bụ ọrụ ya iji weghachite alụmdi na nwunye di iche iche n'ụwa. Smith, bụ onye lụrụ di na nwunye iri atọ na atọ ma mụọ ụmụ iri na atọ n'ime ha, kwuru na e nyewo ya ikike ịme "alụmdi na nwunye eluigwe" site n'otu ebe ahụ nyere Ebreham iwu ka ọ kpọrọ ohu ya, bụ Hega, ka ọ dinara iji mepụta mkpụrụ ezi na ụmụ dị ebube. Smith, dị ka ndị ọzọ nke oge ya na n'ebe ọdịda anyanwụ New York, ejidere na "Nrọ Amerịka nke inwe ọganihu na-enwe mgbe niile, na-ekwere na nkà mmụta okpukpe pụrụ iche nke ụmụ nwoke na ndị na-ejikọta chi nile" (Young 1954: 29). Smith kọwara ọhụụ ọ nwere banyere Chineke na Kraist ọnụ n'ime osisi nke Kraịst gwara ya na ọ ga-enye aka n'iweghachi ezi ozi ọma ahụ.
Okposụkedi Smith ama ọfiọk Ibet Ukpepn̄kpọ N̄wed emi ke 1843, ẹkenam enye ke ediwak isua ke ndondo emi ke Nauvoo, Illinois. Na 1852, Brigham Young, onye ndú nke Chọọchị Mormons), gosipụtara omume nke alụmdi na nwunye ọtụtụ di ka ozizi Mormon. Mgbe ndị Mormons natara mkpughe banyere ịlụ otu nwanyị, ndị na-akwado ya kwadoro na ọ bụ ezie na otu nwanyị na-akpakọrịta na nsogbu ndị dị ka ịkwa iko na ịgba akwụna, otu nwanyị nwere ike izute mkpa ọ dị inwe mmekọahụ n'èzí n'alụmdi na nwunye maka ndị ikom n'èzí n'alụmdi na nwunye n'ụzọ ka njọ (Gordon 2001). Na-eto eto, na-enwe obi ụtọ n'oge mbụ, mechara merie ihere ya ma lụọ di na nwunye iri ise na ise. O nwere ụmụ iri ise na asaa site na iri na iri n'ime ndị nwunye ya na-ehi ụra. Otú ọ dị, n'ekpere ya na Utah, ọ bụ nanị ihe dị ka pasent iri ise na pasent iri abụọ nke ndị okenye LDS, nke ka ukwuu n'ime ndị isi (Quinn 1993) na-eme. Ọ bụ ezie na alụmdi na nwunye dị ọtụtụ na-eme n'ihu ọha na Territory Utah, ọ bụghị ruo na 1876 na ọ ghọrọ akwụkwọ okpukpe okpukpe nke gụnyere na Ozizi na ọgbụgba ndụ.
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Washington anaghị anabata ihe ọhụrụ a. Na 1856, usoro ikpo okwu nke Republican Party ọhụrụ hiwere isi ka ha kweta "ejiri ejima abụọ"; ịlụ nwanyị na ịgba ohu. Na 1862, gọọmenti etiti gọọmentị gọọmenti na-akwa iko karịa otu nwanyị na mpaghara ya site na iwu Morrill Anti-Bigamy. Mormons, bụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ ndị bi n'obodo Utah, leghaara omume ahụ anya.
Otú ọ dị, ikpe maka ịgba alụkwaghịm otu nwanyị siri ike n'ihi na ihe àmà nke alụmdi na nwunye di na nwunye a na-edeghị aha dị ụkọ. Otú ọ dị, na 1887, Edmunds-Tucker Act mere ka nwanyị otu nwanyị na-eme ihe na-esere ya na nwanyị ma kwe ka ikpe na-adabere nanị n'ịlụ nwanyị. Ndị di na nwunye adịghị mkpa ka ha ghara ịgafe n'ememe ọ bụla a ga-ebubo ebubo nke Polygamy n'ebughị n'uche ịlụ di na nwunye. A na-ama ọtụtụ ndị polygamists, tinyere ndị nna nna m, Angus Cannon na nwanne ya nwoke bụ George Q. Cannon, ka a mara ha ọnwa isii n'ụlọ mkpọrọ na 1889. Ihe ikpeazu a na-enwe na narị afọ nke iri na itoolu, ọtụtụ ndị inyom Mormon na-abịa n'otu afọ ahụ mgbe Congress kwụsịrị ụlọ ọrụ nke Chọọchị Mormons ma jide ọtụtụ n'ime ihe onwunwe ya. N'ime afọ abụọ, gọọmentị gọnahụkwara ikike nke ụka dị ka òtù okpukpe a na-echebe. Usoro iwu a nke iwepụ ihe onwunwe nke ụka na-egosi na ezinụlọ dị iche iche na-enweghị ego ha ga-ahapụ ndị inyom ndị a nwekwuo iwu na-akwadoghị n'okpuru Iwu Edmunds. Ngbahapụ a mere ka nnukwu ìgwè nke ndị inyom na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na-enweghị di ma ọ bụ nwunye bụ ndị a na-ejikọtaghị na di ha n'ụzọ okpukpe ma ọ bụ n'ụzọ akụ na ụba. N'ihi nrụgide nke Edmunds-Tucker Act, chọọchị LDS kwụsịrị ịlụ di na nwunye na 1890 na nkwenkwe nke onyeisi chọọchị bụ Wilford Woodruff. Ebatara Utah na Union na 1896. Dika iwu iwu di na nwunye si di, ọtụtụ ndị na-akwado alụmdi na nwunye di iche iche malitere ịpụ na Mexico na 1885 iji zere ịgba akwụkwọ. N'ebe ahụ, ha kere obere ndị ọchịchị, atọ n'ime ha ka dị taa.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọtụtụ ndị òtù Chọọchị LDS, gụnyere nna m Cannon na Bennion na President Woodruff onwe ya (Kraut 1989), nọgidere na-enweta nwunye ogologo oge mgbe 1890 manifestation prohibited it. Na 1904, iji kwado omume omume nke ịlụ di ma ọ bụ nwunye ọtụtụ ugboro, Joseph F. Smith nyere ihe ngosi nke e mere iji kpochapụ otu nwanyị otu ugboro. Mormons dị iche iche kwenyere na e jiri ihe abụọ ahụ mee ihe iji mee ka ọgbụgba ndụ dị nsọ maka ọdịmma ndọrọ ndọrọ ọchịchị (Willie Jessop, nke e hotara na Anderson 2010: 40); ha kwenyere na Chineke ejiriwo ikike zoo ikike iji nọgide na-enwe otu nwanyị na John Taylor (onye amụma nke atọ nke ụka) site na mkpughe na 1886. Nkpughe a bụ akụkọ na-akọwapụta maka ndị nkenke na-eduga na nkewa ha na chọọchị dịpụrụ adịpụ (Driggs 2005). Taylor kwuru na mgbe ọ nọ na-ezo n'ụlọ obibi John Woolley na Centerville, Utah, ya na Joseph Smith nọrọ otu abalị zuru ezu, bụ onye nyere ya iwu ka ọ nọgide na-eme ọtụtụ nwanyị. Nwa John Woolley, Lorin, onye na-eche nche nye onye amụma, nọ n'oge nzukọ ezumike na September 27 na ezinụlọ Woolley. Ná nzukọ a, John Taylor nyere George Q. Cannon, John W. Woolley, Samuel Bateman, Charles Wilkins, na Lorin Woolley dịka ndị nchụàjà "sub rosa" ma nye ha ikike ịlụ di na nwunye. E nyere John Woolley isi ihe dị na ya usoro nna ochie, ma ọ bụ igodo ndị nchụàjà. O mechara nyefee ha na Lorin, [Foto na nri] bụ ndị Chọọchị LDS mesịrị chụpụ na "ụgha ụgha."
Ná mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, ọnọdụ iwu nke nwanyị karịrị otu nwanyị na Utah ka dị anya. Na 1904, Ụlọikpe Na-ahụ maka United States nwere ọtụtụ nụ mgbe a họpụtara onyeozi Reed Smoot ka ọ bụrụ onye nnọchiteanya si Utah. Esemokwu ahụ dabeere na ma ọ bụ na chọọchị LDS ejiri nzuzo na-akwado di na nwunye ọtụtụ. Na 1905, chọọchị LDS nyere ihe ngosi nke abụọ nke gosipụtara nkwenye nke chọọchị ahụ, nke nyeere Smoot aka ịnọ oche oche ya. Ma ikpe ahụ gara n'ihu ruo mgbe 1907, ọtụtụ ndị Omeiwu ka nwere mmasị n'ịma Smoot maka mkpakọrịta ya na chọọchị Mọmọn. Site na 1910, ndị ndú Mormon na-amalite ịchụpụ ndị na-etolite njikọ ọhụụ di iche iche ọhụrụ, na-echekwa ihe ndị dị n'ime ala. Site na 1929 ruo na 1933, ndị Mormon fundamentalist ndị ndú jụrụ ịkwụsị ịlụ otu nwanyị ma bụrụ ndị ejidere njide na disenfranchisement. Na 1935, ome iwu omeiwu nke Utah buliri mpụ nke imekọ iwu na-akwadoghị site n'aka onye na-ezighị ezi na felony. N'afọ ahụ kwa, ndị Utah na ndị Arizona na-ahụ maka iwu iwu na-agba ọsọ n'ebe obibi nke nwanyị dị na Short Creek mgbe ebubo gbasara ịlụ nwanyị karịa na ịzụ ahịa mmekọahụ.
Site na 1928 ruo 1934, Lorin C. Woolley duuru otu a kpọrọ Nzukọ nke Asaa, nke a makwaara dịka Council of Friends. Ndị a gụnyere Lorin Woolley, John Y. Barlow, Leslie Broadbent, Charles Zitting, Joseph Musser, LeGrand Woolley, na Louis Kelsch. Woolley kwuru na ndị isi oche ahụ bụ ezi ndị ụkọchukwu nke ụwa ma dịrị na nzuzo, na Nauvoo, Illinois. Ihe omuma ala a mere ka ufodu ozizi nke Brigham Young di ka ndi mmadu, nkwenye Adam-Chineke, na otutu di na nwunye. Ndị ndú nke òtù ahụ kwuru na Chọọchị LDS enwekwaghị ikike iji nweta nkpughe ziri ezi sitere na Chineke mgbe ọ kwụsịrị ụkpụrụ dị nsọ nke alụmdi na nwunye di iche iche n'oge onyeisi oche Woodruff.
Ọ bụ ezie na Council of Friends malitere na Salt Lake, ọ kwagara iwu ya n'obodo Short Creek na Utah-Arizona ókè iji zere ikpe. Short Creek setịpụrụ ohere maka mgbalị mbụ iji mepụta United Order ma ọ bụ Mgbalị, iji nyere aka n'ịhazi njirimara ma jikwaa ala. Ebe ahụ, ebe nnukwu nkume na-acha uhie uhie na ebe ndị na-amị mkpụrụ na-amị mkpụrụ jupụtara na ya, edoro ya nsọ site na Brigham Young, bụ onye kwuru na ọ ga-abụ "isi abụghị isi" nke Chọọchị. Ruo afọ iri, ọ bụ ebe ezukọta maka ọtụtụ ndị òtù Chọọchị LDS bụ ndị chọrọ ịhapụ di na nwunye ndụ. Ndị òtù Council nke Enyi na-ekwukarị otú ha ga-esi na-agagharị n'okporo ụzọ ndị ụkọchukwu, ma ọnụ ọgụgụ nke ndị na-akwado okpukpe Mormon na-etolite, nke ka ukwuu site na mmụba nke ndị mmadụ na mbata nke ndị Mọmọn Mormon na-achọ ịda mbà n'obi bụ ndị chọrọ ibi ndụ "ụzọ ochie." Na 1935, Chọọchị LDS gwara ndị òtù Short Creek ka ha kwadoo ndị isi oche nke chọọchị ahụ ma bịanye aka n'ịṅụ iyi maka ịlụ di na nwunye. Achọghị arịrịọ a nke ọma na mmadụ iri abụọ na otu, ndị jụrụ ịbanye ma mesịa kpochapụ ya. A tụrụ ọtụtụ ndị òtù mkpọrọ maka ịlụ nwa.
N'ikwekọ na nzukọ nke Short Creek bụ mmepe nke òtù ndị isi na Colonia Juarez dị n'ebe ugwu Mexico. Benjamin Johnson, onye so na Kansụl nke Iri (otu ọchịchị ụwa ọhụrụ nke e mere na oge Brigham Young), kwuru na ya enwetawo igodo ndị isi nke Young. Ya onwe ya, nyekwa ya nwa nwanne nna ya, Alma "Dayer" LeBaron. Mgbe Dayer gasịrị, Colonia LeBaron, nke dị kilomita iri asatọ n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Colonia Juarez na Galeana, bụ ebe mgbaba nye ndị chọrọ ịlụ di na nwunye.
Ka ọ dịgodị, azụ na Short Creek, ndị isi ochichi ahụ si n'aka Lorin C. Woolley, onye nwụrụ na 1934, na J. Leslie Broadbent, onye dugara ruo mgbe ọ nwụrụ na 1935. John Y. Barlow weere dịka onye amụma si na 1935 ruo 1949, mgbe nke a gasịrị, Joseph Musser na-achịkwa ndị nnọchiteanya ndị ụkọchukwu. Musser na L. Broadbent dere akwụkwọ ahụ Mgbakwunye na Alụmdi na Nwunye Ọhụrụ na Ebighị Ebi (1934), nke guzobere nchịkwa atọ dịka onye ndu ndú nke ndị ọchịchị: 1) ezi ndị ụkọchukwu sitere na ndị isi nchụàjà, nke a maara n'oge ochie dịka Sanhedrin, ma ọ bụ ike nke Chineke n'elu ụwa; 2) ala eze nke Chineke, uzo nke ike na ikike nke Chineke neme ka icho uwa na "ndi bi nime ya n'ihe ndi agha;" na 3) Nzuko nke Jisos Kraist (nzuko nke ndi LDS), nke nwere nani ochichi ndi uka n'elu ndị òtù ya. Akụkụ mbụ, dị ka Musser si kwuo, gụnyere ndị isi ihe ndị bụ isi, ya onwe ya na ndị ọzọ nọ na kọmitii ahụ. Ụdị nke abụọ a na-ezo aka na nnukwu òtù nke ndị isi, bụ ndị na-eje ozi na ihe ntinye. Onye nke atọ na-ezo aka na chọọchị chọọchị ndị ụka, bụ ndị na-enweghịzi ikike iji rụọ ọrụ Chineke kama ha ka na-enye ihe nrịta dị mkpa na ọkwa ndị ọzọ.
Na 1944, mgbe Barlow na-edu ndú, ọchịchị United States gbara ọsọ megide Short Creek na ndị inyom PolyGmist Salt Lake City, na-etinye ụmụ nwoke iri na ise na ndị inyom itoolu n'Ụlọ Mkpọrọ nke Utah. Ná mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, ọnọdụ iwu nke nwanyị karịrị otu nwanyị na Utah ka dị anya.
Na July 26, 1953, ihe agha ọzọ kpochapụrụ na Short Creek. Mgbe agha a gasịrị, e jidere ndị ikom iri atọ na otu na ụmụ nwanyị itoolu na ụmụaka 263 wepụrụ n'ụlọ ha ma tinye ya n'ụlọ mkpọrọ. N'ime ụmụ 236, 150 ekweghị ka ha laghachikwuru ndị mụrụ ha ihe karịrị afọ abụọ.
Ndị nne na nna ndị ọzọ enwetaghachighị ikike nke ụmụ ha. Tupu mwakpo ahụ, ọgbakọ ndị nchụ aja nke Short Creek amalitela kewaa, na-emezu amụma nke John Woolley ọtụtụ afọ tupu oge ahụ “ọgbọ na-amụbeghị amụ, ya na ụfọdụ ụmụ nwoke bi ebe a ugbu a, ga-ehibe otu. . . [na]. . . ga na-ese okwu n’etiti onwe ha, na ha ga-ekewa, na ha ga-ekewa na ha ga-abụ nnukwu esemokwu ”(nke ekwuru na Kraut 1989: 22).
Mgbe Joseph Musser nwere ọrịa strok na 1949, ọ kpọrọ dọkịta ya, bụ Rulon C. Allred, [Foto na nri] ka ọ bụrụ okenye nke abụọ ya. Na 1951, Musser natara ike iji sonye Richard Jessop na ntuli aka Rulon dị ka onyeisi nke ndị isi chọọchị. Mkpebi Musser bụ onye ọtụtụ n'ime ndị isi ahụ, bụ ndị na-anọghị n'oge nhọpụta nke Rulon, na-akpali esemokwu na nkọwa dịgasị iche iche banyere onye ga-abụ "onye dị ike na nke siri ike." Nke a na-arụrịta ụka kewara òkè mbụ ahụ. Rulon Allred duziri otu ìgwè, Louis Kelsch na-agakwa nke ọzọ. Leroy S. Johnson na Charles Zitting, bụ ndị na-eguzosi ike n'ihe nye Kelsch, nọgidere na Short Creek, bụ ebe ha guzobere Chọọchị bụ isi nke Jisọs Kraịst nke Ndi-nsọ Ụbọchi-ikpeazu, mgbe Musser, Jessop, na Allred malitere ọrụ iji malite usoro ọhụrụ, bụ nke mesịrị mara dị ka Apostolic United Brethren. Òtù ndị a mejupụtara otu nnọkọ ọhụrụ na 1952 nke E. Jenson, John Butchereit, Lyman Jessop, Owen Allred, Marvin Allred, na Joseph Thompson. Ọ bụ ezie na nkewa a dugara ná mgbanwe ndị dị ukwuu n'okwu nkwenkwe nke Mormon, òtù nile nke oge a bụ ndị sitere na ntọala mbụ nke Creek Creek na-ekerịta ụbụrụ nke ikwu, alụmdi na nwunye, na nkwenkwe ndị bụ isi.
Ndị nkenke Mormon bụ ndị na-edebanye aha na ụma nke nkà mmụta sayensị nke Ụbọchị Ikpeazụ nke Joseph Smith hibere nke na-agụnye ịlụ otu nwanyị, ọrụ okike omenala, na okpukpe ndị okpukpe. Ihe dị ka pasent iri asaa na ise nke ndị nwanyị a sitere na atọ kachasị okpukpu atọ: Apostolic United Brethren (AUB ma ọ bụ Allred Group), Ndị Ntorobịa nke Akwụkwọ Nsọ (FDSDS), na Kingston Clan. Ndị ọzọ fọdụrụ site na obere obodo LeBaron dị na Mexico na ndị inyom na-enweghị atụ na-agbasa n'ebe nile ọdịda anyanwụ nke United States bụ ndị a maara dịka "ndị nọọrọ onwe ha." A na-arara òtù ndị a na ndị mmadụ n'otu n'otu nye ụkpụrụ ụlọ nke Abraham nke na-ebute ihe mgbaru ọsọ kasịnụ ịbanye na ihu igwe nke Chineke, Nna.
Iji chịkọta ọdịiche dị iche iche nke ndị nkwenkwe AUB site na ụlọ ụka bụ isi, Ogden Kraut (1983) bụ polygamist depụtara ọtụtụ isi okwu: omume nke ịlụ karịa otu nwanyị, omume nke ndị ozi ala ọzọ, nkwenkwe banyere ọkwa nchụ aja, nnabata nke United Order, nkwenye na echiche banyere nchịkọta nke Israel, nkwenye n’echiche Adam-Chineke, ịnabata echiche nke “otu onye dị ike ma sie ike,” mmepe nke echiche nke Zaịọn, nkwenye banyere ndị isi ojii na ndị ụkọchukwu, na nkwenkwe banyere alaeze Chineke. Ozizi Adam-Chineke bụ echiche nke nkà mmụta okpukpe nke Brigham Young kụziri na Adam sitere na mbara ụwa ọzọ wee bịa n'ụwa dị ka Maịkel, mmụọ ozi ahụ. Mgbe ahụ ọ ghọrọ mmadụ efu, Adam, na-ehiwe agbụrụ mmadụ site na nwunye nke abụọ ya, Iv. Mgbe ọ rigoro n’elu-igwe, ọ rụrụ ọrụ dịka Chineke, Nna nke Eluigwe nke ihe a kpọrọ mmadụ.
Ndị isi ihe dị iche iche dị iche na mkpakọrịta ha na "oge zuru ezu" na di na nwunye na ọtụtụ nkwenkwe ha na mmadụ aghaghị ịlụ nwunye site na Iwu Sera iji nweta ebube kachasị elu nke Alaeze eluigwe .6 Ha kwenyere na ozioma adịghị agbanwe agbanwe; ya mere, ọ bụrụ na Chineke gwara Joseph Smith ka ọ na-eme otu nwanyị, a ghaghị ime ya taa na mgbe niile. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, eziokwu bụ ihe ọmụma nke "ihe dịka ha dị, na dị ka ha dị, na dịka ha ga-abịa" (Ozizi na ọgbụgba ndụ 93: 24). Smith kwukwara na ọ bụrụ na "onye ọ bụla kwusaa ozioma ọ bụla karịa nke m kwusara, ọ ga-abụ onye a bụrụ ọnụ" (Smith 1838: 327) nakwa na Chineke "na-edozi iwu ndị ahụ ka ọ bụrụ otu ihe ahụ ruo mgbe ebighị ebi" (Smith 1838: 168 ).
Ihe ndị a na-eme na nkwenye, ndị nkenke na-eche, ọ bụ ya mere ha ekwesịghị ịgbanwe, dịka ha nọ na 1927, mgbe onyeozi LDS bụ Stephen Richards jụrụ ozizi Adam-Chineke ma wepụ ihe oyiyi ya na uwe ndị uwe ojii (Richards 1932), nakwa na 1990s, mgbe LDS onye amụma bụ Ezra T. Benson gbanwere ememe ahụ iji mee ka ụmụ nwanyị nweta ụzọ ziri ezi nye Chineke kama ịnata di ha ma ọ bụ nna ha. Ngbanwe ikpeazụ ahụ wepụrụ akara ngosi na mmegharị ahụ iji gosipụta ihe nwere ike ịdaba ma ọ bụrụ na e gosipụtara ememe nsọ ahụ, ọ bụghị ka ndị Masons ji ya. Chọọchị LDS gbanwekwara ụdị nke na-eme ka ndị nsọ banye n'ihu Chineke ma mee ka uwe nsọ ahụ dị mkpirikpi. Ndị isi okpukpe kwenyere na a ga-ebigharị ememe na akara ndị furu efu nakwa na ndị inyom ga-esi n'aka ndị njem ha na Mt. Zayọn n'okporo ụzọ ha nye Chineke. Ha na-ekwusi ike na okwu ndị dị n'ememe dị nsọ, ndị e ji mee ihe n'ụbọchị Joseph Smith mgbe a na-enye ngọzi ndị nchụàjà, kwesịrị iji ya n'oge a, nke a na-ekwu na narị afọ nke iri na itoolu.
Ọtụtụ ndị òtù AUB na-ajụkwa ihe ngosi 1978 nyere President Kimball nke mere ka ndị ojii banye n'ọchichi (Ozizi na ọgbụgba ndụ, Nkwupụta 2). Ha kwenyere na Chineke gwara Joseph Smith na "ndị na-eme ihe ọjọọ" bụ ọbara ọbara Ken na-egosi na ọ ga-emerụ ndị nchụàjà na ụlọ nsọ. FLDS wepụrụ ndị Polynesia n'etiti ha, na-ekwu na ya gbara ọchịchịrị, ha na-agbakasịkwa agbamakwụkwọ di iche iche ọ bụla. Brigham Young kwadoro nkwenkwe ndị dị otú ahụ mgbe o dere na ndị ojii ahụ "dị ala n'omume ha, o yiri ka ha enweghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngọzi nile nke ọgụgụ isi nke enyere mmadụ niile" (Young 1867: 290). Ndị AUB na LeBarons na-emegidekwa oji ma na-ekwe ka njikọ ọ bụla jikọrọ ya na ndị Hispanics na ndị Polynesia. Ka o sina dị, AUB wepụrụ Richard Kunz (onye bụ phenotypic white na genotypic black) site n'ọkwá ya na ndị isi ndị ụkọchukwu.
Ihe ọzọ dị iche n'etiti Chọọchị LDS na AUB bụ na ha kwenyere na iwu Chineke ga-akarị iwu mmadụ. Ọ bụ ezie na aghụghọ ule, njakịrị, nchịkọta ngwá agha iwu na-akwadoghị, ma ọ bụ ụfọdụ ụdị akwụkwọ ụlọ akwụkwọ nwere ike imegide iwu obodo, ha bụ ụzọ isi na-agbaso iwu dị elu nke inye ụmụaka dị ukwuu (Hales 2006). Ekwesiri ighota na ufodu ndi obodo polygamist, dika Pinesdale, Montana, na ndi oru mmanu iwu na ndi oru iwu. Ha debanyere ndị omekome ọ bụla na-akwa iko ma chụpụ ndị omempụ ọ bụla.
AUB kwenyere na a ga-eduzi ọrụ ozi ala ọzọ dị ka Joseph Smith nyere iwu ya, na-enweghị "akpa ego ma ọ bụ akpa," nke pụtara na-enweghị nkwado ego. Ha ekwenyeghi na njirimara nke uka nke isi nke Independence, Missouri, dika "otu ebe" maka nzuko nke Zaion. A makwa ebe a dika Adam-ondi-Ahman, ma obu ubi ugbo nke Iden. Otutu ndi nkenke n'eche na Zaion di n'ugwu Rocky, ebe Onye nzoputa galoghachi.
Ndị isi okpukpe Mormon, dị ka LDS ndị bụ isi, na-ajụ Chineke ka ha weere onwe ha dị ka Adam ma ọ bụ Iv, echiche nke e tinyere na mgbakọ onyinye. Ha niile na-eje ozi n'oge oge ọhụụ n'elu ụwa ruo mgbe ha ga-alaghachi n'ihu Nna ahụ. N'oge a nwa oge, ha aghaghị, dị ka Adam, na-agbaso "ìhè na ihe ọmụma" na ịchọ ndị ozi nwere ike iduzi ha n'ịnara mkpịsị ugodi ndị nwere ike ịmeghe ike nke ndị nchụàjà ma wepụ ihe mkpuchi ahụ nke dịka ụwa na Alaeze eluigwe.
Maka ndi nkenke nke apocalyptic, ihe ebube na ihe iriba ama di iche iche na ihe obula na ederede nile nwere ihe di nma. Ọtụtụ n'ime ihe ịrịba ama ndị a na-eduzi ndị na-eme ihe nkiri ka ha gaa n'elu ma bụrụ ndị na-agbanyeghị agbụrụ ma na-agbasi mbọ ike iso n'etiti ndị a gọziri agọzi bi na ndị Chineke (Maịkel makwaara dị ka Adam, Jizọs, na Josef) ma nata "ihe omimi nke alaeze ahụ "(Ozizi na ọgbụgba ndụ 63: 23; 76: 1-7). Ma ọ bụghị mmadụ nile nwere ike ịghọta ihe omimi; ndi ezi omume n'ezie aghagh inwe "anya ihu na nti inu ihe" eziokwu banyere uju nke ozioma. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahụ onye amụma ha nke oge a (Jeffs, Allred, Kingston, na ihe ndị ọzọ) dị ka isi iyi nke mkpughe Chineke, ma ndị nwe obodo na - ekwukarị na ha onwe ha nwere "ihe nzuzo dị nsọ" nke mkpughe nke mmadụ na -Okwu nkọwa na Iwu 1972:141). Nke ahụ bụ ọnyà nke fundamentalism, na ị nwere ike ịbụ onye amụma gị, onye ọhụụ, na eze.
Ihe omimi ndia bu ihe omuma nke Chineke iji nyochaa odidi nke ndi amuma. Otu gụnyere itinye oku na ntuli aka (Young 1867) ka Onye A Họpụtara ga-enwe ikike ikwurịta okwu na ndị nwụrụ anwụ karịa veel ahụ ma nata mkpughe sitere n'aka Chineke. Nzọzọ ọzọ bụ ịdị umeala n'obi n'ụdị ekpere, usoro nke Adam ji mee ihe; ndị na-agbaso omume a na-eyi uwe nsọ nke ụlọ nsọ, ikpere ikpere, na-ekpe ekpere site na aka aka nke otuto na ịrịọsi arịrịọ ike, na-eti mkpu, "Chineke, nụrụ okwu ọnụ m." Dịka e nyere Joseph Smith iwu na ozizi nke Chineke, nwoke ọ bụla nke na-achọ onye isi nchụàjà nke kwesịrị ekwesị, onye na-asọpụrụ ọgbụgba ndụ ahụ, na ndị agụụ na-agụsi agụụ ike maka ihe ọmụma. Ndị nsọ nke na-etinye onwe ha nye ezi omume ma nata ukpuru dị elu nke ebuli elu na-abụ ndị so na "ụka nke ọkpara," nke dị n'ime ndị nsọ kwesịrị ntụkwasị obi nke na-arụzu zuru ezu na ndị ga-eso Kraịst chịa na ịnweta ihe nile Nna ahụ (McConkie) 1991: 139-40). A ga-eji "mmụọ nsọ nke nkwa" ahụ kaa ha, ha ga-abụ ndị eze na Chineke n'eme ya, ha ga-ekerekwa na mbilite n'ọnwụ mbụ ahụ. Nke a ga - enyere ha aka ibi na Mt. Zayọn na Chineke n'etiti ndị mmụọ ozi na Alaeze Eluigwe (Ozizi na ọgbụgba ndụ 76: 50-70). Enwere ike ịgwa ndị nke ọkpara ka ha mebie iwu nke ala maka iwu dị elu, ma eleghị anya ọbụna gbuo mmadụ, dịka a gwara Nephi onye amụma nke Akwụkwọ Mormon ka ọ gbuo onye ọjọọ, Leban. Ọ bụ site na usoro a "nanị ndị mmadụ ga-eme ka ha zuo okè" ma nye ha onyinye nke alaeze na isi na ụwa ọhụrụ karịa ókè nke echiche ha.
E wezụga "ihe omimi," ụkpụrụ kachasị mkpa nke Chọọchị LDS gbahapụrụ bụ otu nwanyị, ozizi Adam-Chineke, na Iwu nke Ndozi. Mgbe ụkpụrụ ndị a na-emezughị, usoro nke eluigwe na-emezi ihe dị iche iche dị iche iche nke ozi ọma dị iche iche dị iche iche na-arụ ọrụ n'usoro: mmekọrịta mmadụ na ibe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ime mmụọ, na akụnụba. Uzo nke usoro nke elu-igwe bu otu nwanyi, ihe ndi ochichi bu ala eze nke Chineke ma obu ochichi nke Chineke, ihe ime mmuo bu ndi nchu aja dika ndu nke mkpughere, ihe omuma bu United Order.
Ndị Apostolic United Breathern (AUB) nwere ihe dị ka ndị òtù 8,000 gburugburu ụwa. Isi ụlọ ọrụ ha dị na Bluffdale, Utah, ebe ha nwere ụlọ ụka / ọdịbendị, ụlọ onyinye, ụlọ akwụkwọ, ebe nchekwa, na ebe egwuregwu. Imirikiti ndị otu nọ na ụlọ obibi larịị ọkara na-arụ ọrụ na iwu. Ogige ndị nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na Eagle Mountain na Rocky Ridge na-eburu ụmụ nwanyị anọ na ise na ụmụaka iri abụọ na ise. Chọọchị na-arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala ụlọ akwụkwọ atọ onwe ha, mana ọtụtụ ezinụlọ na-aga ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ziga ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ ọha na eze ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ ọha na eze, na-agwakọta na isi. Alaka ndị ọzọ gụnyere Cedar City, Lehi, na Granite, Utah; Pinesdale, Montana; Lovell, Wyoming; Mesa, Arizona; Humansville, Missouri; na Ozumba, Mexico, ebe o nwere ụlọ nsọ nwere ihe ruru ndị na-eso ụzọ 700. Ọtụtụ ndị otu AUB bi na Germany, Netherlands, na England.
Dịka e kwuru, Dr. Rulon C. Allred, onye ọmụmụ ụwa, ghọrọ onye amụma na 1954, na-akwado ịlụ karịa otu nwanyị ma na-enwe mmekọrịta siri ike na Chọọchị LDS, n'agbanyeghị na a chụpụrụ ya. Ọ hụghị mbọ ntọala ahụ n'elu chọọchị ahụ yiri ya, na-eche na ọ bụghị mmadụ nile nwere ike (ma ọ bụ kwesịrị) itinye aka na otu nwanyị.
Site na 1959, ndị AUB etolitela ndị otu 1,000 site na enyemaka nke Joseph Lyman Jessop, Joseph Thompson, na ndị ọzọ gbanwere, bụ ndị zutere na nzuzo Bluffdale n'ụlọ Owen Allred, nwanne nwanne Rulon. Na 1960, Rulon Allred zụtara 640 acres na Pinesdale, Montana maka $ 42,500, yana site na 1973 karịa 400 fundamentalists kpọrọ ya n'ụlọ. Mgbe m nọ ebe ahụ, site na 1989 ruo 1993, enwere ụlọ akwụkwọ / ụlọ chọọchị, ọbá akwụkwọ, ọrụ ehi, ụlọ ọrụ igwe, na ihe eji arụ ọrụ mmiri ara ehi. Agụrụ m ụmụ nwoke 60-70 lụrụ di na nwunye (ndị nna ochie) yana ndị nwunye 140-150 (gburugburu 2.8 ọ bụla, na nkezi) na ụmụaka 720. Ndị Jessops (Marvin na Morris) na ụmụ ha ndị nwoke bụ ndị isi nke Pinesdale, yana ndị otu na-esighi ike nke kansụl ndị nchụ-aja.
Onyinye AUB na-agbasapụ maka mgbanwe karịa ụdị ọ bụla ọzọ. Ndị mmadụ nabatara nkwa nke iwepu ụlọ na ụlọ eze na-enwe ụlọ ọrụ na-egbochi ole na ole. Nzukọ ụkọchukwu nọ n'ụlọ, na ụlọ ụlọ nsọ, na ụlọ chọọchị, ma ọ bụ ọbụna n'ugwu ma ọ bụ ubi. Site na 1970, ọnụ ọgụgụ ndị òtù AUB nọ nso na 2,500 na-agbasawanye n'ebe ndịda Utah ma na Wasatch Front.
Ndị isi ndị nchụaja nke Rulon Allred gụnyere Rulon, Owen Allred, George Scott, Ormand Lavery, Marvin Jessop na nwanne ya nwoke Morris Jessop, Lamoine Jensen, George Maycock, John Ray na Bill Baird. Kemgbe ọtụtụ afọ, Rulon nọchiri ndị òtù nwụrụ anwụ, bụ ndị a chụpụrụ (dịka nke John Ray), ma ọ bụ ndị si n'ezi ofufe dapụ. Rulon mere ka ụmụnne ya nwoke abụọ, Owen na Marvin nọrọ nso, na-enye ha ọrụ nlekọta dị mma ma nye ha ikike ịlụ ọtụtụ nwunye ọ bụla. Ndị AUB na-eji ihe eji eme ihe n'ụlọ ụka LDS n'okwuchukwu ha na nkuzi nke ụlọ akwụkwọ Sọnde. Ọtụtụ n'ime ọfịs na ịkpọ oku bụ otu. Ndị otu AUB na-ejikọ ọnụ na gburugburu obodo Mormon, ọkachasị n'ihi Ọchịchọ Owen Allred chọrọ ịrụ ọrụ na ndị ọrụ mmanye na-ahụ maka iwu obodo ma kwusi mmemme nke di na nwunye na-edoghị anya. Allred [Image na nri] kwenyere na nghọta bụ otu ihe dị mkpa ná mgbalị ya igosi ndị na-abụghị ndị Mọmọn na AUB na ndị òtù ya abụghị ihe egwu.
Na 1977, nwanyị gburu ọchụ nke Ervil LeBaron gburu Rulon na nwanne ya nwoke Owen nọchiri ya. Owen duuru ìgwè ahụ ruo afọ iri abụọ na asatọ, oge mgbe AUB mụbara ndị otu ya ma banye n'oge mmekorita ya na ndị nta akụkọ, agụmakwụkwọ, na ọfịs ọka iwu Ọchịchị Utah.
Ebubo mmejọ ụmụaka na-eme megide ndị kansụl Allred iri atọ n'ime afọ iri abụọ, 1975-1995: John Ray, Lyn Thompson, na Chevral Palacios. N'agbanyeghị nke ahụ, ọnụọgụ nke mmejọ karịrị ihe ị ga-atụ anya ịchọta na isi obodo otu nwanyị nke United States. A na-achụpụ ndị otu na-emejọ mmadụ, a na-agbakwa ndị ọdachi ahụ mere ka ha kọọrọ ndị uwe ojii ihe ndị ahụ. Na mgbakwunye, ana m atụ aro na AUB na-aga n’ihu ma na-asọpụrụ iwu karịa otu ndị ọzọ. Ndị otu ya na-akwụ ụtụ isi ha, yiri ka ha na-eyi uwe dịka ndị ọzọ maka ọtụtụ akụkụ, na-eziga ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ ọha, ọbụnakwa nwee ndị agha Scout. Enwere ụfọdụ ijiji na mmanu AUB, dị ka nwoke nke Allredite bụ onye jidere n'oge na-adịbeghị anya maka idina ụmụnne nwanyị abụọ na Humansville, Missouri. Enwekwara ihe akaebe nke igbanye ego na ụfọdụ aghụghọ aghụghọ. Dị ka otu onye bụbu onye otu, onye ọka iwu John Llewellyn si kwuo, a na-eziga ọtụtụ nwunye na Hamilton dị nso iji tinye maka ọdịmma dị ka ndị nne na-azụ ụmụ, ha na-ewepụrụ ego a ozugbo na ndị ụkọchukwu ndị ụkọchukwu. Na nyocha nke onwe m na 1993, anụrụ m banyere iji aka ọdịmma eme ihe na pasent iri abụọ na ise nke nlele nke ezinụlọ iri na ise. Ha lere ya anya n'otu ụzọ ahụ ndị nwunye FLDS si mee, dị ka "ego okike" nke na-anara gọọmentị etiti, ihe rụrụ arụ.
Na 2004, ndị isi nchụ aja gụnyere Owen Allred, Lamoine Jensen, Ron Allred, Dave Watson, Lyn Thompson, Shem Jessop, Harry Bonell, Sam Allred, Marvin Jessop na Morris Jessop. Na 2005, Owen Allred nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri itoolu na otu, mgbe ọ họpụtara Lamoine Jensen ka ọ bụrụ onye nọchiri ya, na-agafe ndị isi kansụl. Na 2015, Lamoine nwụrụ n'ihi ọrịa cancer nke eriri afọ, nke kpatara nnukwu ndịiche n'etiti ndị otu na-eso Lyn Thompson na ndị ọzọ na-eso Morris na Marvin Jessop.
Foto #3: Rulon Allred.
** Ọ gwụla ma ọ bụghị nke ọzọ, ihe dị na profaịlụ a na-adọta site n'aka Janet Bennion, Polygamy na Primetime (Mahadum University nke Brandeis, 2012).
Anderson, Scott. 2010. "Ndị Polygamists." National Geographic, February: 34-61.
Driggs, Ken. 2005. "Mkpọrọ, Nkwado, na Nkewa: Otu Akụkọ Ihe Mere Eme nke Mormon na 1940s na 1950s." Dialogue 38: 65-95.
Driggs, Ken. 2001. "'Nke a ga-abụ Isi na Ọchịchị nke Chọọchị': A History of the Mormon Fundamentalists at Short Creek." Akwụkwọ akụkọ nke Church na State 43:49-80.
Gordon, Sarah. 2001. Ajụjụ Mbụ: Mgbaghara Ndị Nwanyị na Nlekọ Iwu na Narị Afọ Iri na Narị Afọ America. Isi nke Chapel: Mahadum North Carolina Press.
Hales, Brian. 2006. Modern Udọ Uwak Iban na Mormon Fundamentalism: The ọgbọ Mgbe Manifesto. Salt Lake City: Greg Kofford Books.
Kraut, Ogden. 1989. Mormon Mormonism. Salt Lake City: Pioneer Press.
McConkie, Bruce R. 1991. Mormon Mormon. Salt Lake City: Bookcraft. [Akwụkwọ Encyclopedic e dere na 1958; ọ bụghị akwụkwọ osise nke Chọọchị LDS.], 139-40
Musser, Joseph, na L. Broadbent. 1934. Mgbakwunye na Alụmdi na Nwunye Ọhụrụ na Ebighị Ebi. Pamphlet. Salt Lake City: Ụlọ ọrụ na-ekwusara eziokwu.
Quinn, D. Michael. 1993. "Ntughari di na nwunye na Moody Mormon." Pp. 240-66 na Fundamentalisms na Society, nke Martin Marty na R. Scott Appleby dere. Chicago: Mahadum nke Chicago.
Richards, Stivin. 1932. Ozizi a na-akụzi na April 1932 LDS n'ozuzu ogbako, kwukwara na Salt Lake Tribune, April 10, 1932.
Smith, Joseph Fielding.  2006. Ozizi nke onye amụma Joseph Smith. Joseph Fielding Smith dere ma dezie ya. Salt Lake City: Deseret Books.
Nwa, Brigham.1867. Journal of Ekwesị 12: 103; 7: 290, November. Liverpool: Chọọchị LDS.
Nwa, Kimball. 1954. "Ọrụ Mmekọahụ na Ezinụlọ Mọmọn." Pp. 373-93 na Na-agụ na Psychology, nke Theodore Newcomb na Eugene Hartley dere. New York: Holt.